३१ वर्षीय मेयर उम्मेदवार रहबरकाे संकल्प: विकसित वीरगञ्ज - Everest Dainik - News from Nepal
३१ वर्षीय मेयर उम्मेदवार रहबरकाे संकल्प: विकसित वीरगञ्ज
'करले होइन रहरले जाउँजाउँ लाग्ने वीरगञ्ज बजार बनाउने छु'
३१ वर्षीय युवा रहबर अन्सारी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा उठेका छन् । हंगेरीको बुडापेष्टस्थित सेन्ट्रल युरोपियन युनिभर्सिटीबाट सार्वजनिक नीति र शासन प्रणालीमा स्नाकोत्तर गरेका युवा अन्सारीले नेपालको मौलाउँदो भ्रष्ट राजनीतिलाई सङ्ल्याउन र जनताको दैनिकिलाई सहज बनाउन कै लागि आफ्नो उम्मेदवारी भनेका छन् । कुनै विवादमा नपरेका र वीरगन्जका युवा पुस्ताले रुचाइएका नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयरका उम्मेदवार अन्सारीसंग के छन, त्यस्ता योजना ? एभरेष्टदैनिकका लागि रघुनाथ बजगाँईँले लिएको अन्तरवार्ता
विरगञ्जको चुनावी माहोलबाटै सुरु गरौँ न कस्तो छ अहिले ?
दलहरु आफ्ना उम्मेदवार छान्दैछन् । केहीले घोषणा गरिसके । हामी संगठन पुर्नगठनसंगै जनतासामु गैरहेका छौँ । वडा-वडामा कमिटि बनाएर परिचालन गर्ने काम भैरहेको छ । नागरिकहरुमा पनि छुट्टै आभाषको सञ्चार भएको पाएको छु । दुई दशकपछिको स्थानीय चुनाव त्यसमा पनि अन्यत्र सकाएर अन्तिममा दुई नम्बर प्रदेशमा हुँदैछ । समग्रमा वातावरण उल्लासमय, चाखलाग्दो यस्तै छ ।
मैले संकल्प नै गरेको छु करले होइन रहरले जाउँजाउँ लाग्ने वीरगञ्ज बजार बनाउने छु भनेर ।
चुुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुनुहुन्छ खास तपाँईको एजेण्डा चाहीँ के हो ?
याे पनि पढ्नुस प्रदेश नम्बर २ मा माओवादीले देखेको जित्ने आधार
सर्वप्रथम त नागरिकको दैनिक जीवनलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने नै हो । ठूला सपना यसअघि नै देखाइसकिएको छ । पुरा भएका छैनन् । म के भनिरहेको छु भने गर्न सक्ने बाचा मात्रै गर्नुपर्छ । मेरो प्राथमिकतामा युवा छन् । कृषि छ । यहाँको अव्यवस्थित तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु छ । मैले संकल्प नै गरेको छु करले होइन रहरले जाउँजाउँ लाग्ने वीरगञ्ज बजार बनाउने छु भनेर । बहुतले पार्किङ भवन, झुत्रो होइन आधुनिक दमकल सेवा, कम्प्युटराइज्ड केन्द्रीय पुस्तकालय र भर्चुअल लाइब्रेरीका बिषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमै उल्लेख गरेको छु । वाइफाइयुक्त स्मार्ट वीरगञ्ज बनाउने योजना छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरको स्पोर्ट क्लब बनाउने छु । म निवाचित भएको खण्डमा घरघरमा बृद्ध भत्ता पुर्याउने छु । महानगरले वडालाई वितरण गर्छ र वडाले घरमै पुर्यार्इदिन्छ । अनलाइन प्रशासनिक सेवा उपलब्ध गराउने, उन्नत विऊ, खाद्य सहज उपलब्ध गराउने, निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृती जस्ता एजेण्डा नै प्रमुखताका साथ उठाएको छु । यहाँका कृषकको जिवनस्तर उकास्नका लागि जे गर्नुपर्छ त्यहि गर्नेछु । बर्षमा दुईपटक खेत जोतिन्छ त्यसमा महानगरपालिकाको तर्फबाट एकपटक जोतिदिने र एक पटक किसानले जोत्नेछन् । म निर्वाचित भएको खण्डमा यो तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनको बिषय पनि छ ।
मेयर चलाउने भनेको व्यवस्थापन गर्ने हो, नीति नियम बनाउने र लागु गर्ने हो, मधेस उत्पीडनमा पर्यो भन्ने बिषय माओवादीले धेरै पहिले भनेको हो । उत्पीडन पहाडमा पनि छ ।
याे पनि पढ्नुस दार्चुलाकाे मार्मा गाउँपालिकाकाे अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा माओवादीको अग्रता यथावत
साधारण तर नागरिकको दैनिकिसंग जोडिने प्रकृतिका एजेण्डाहरु सुनाउनुभयो, भनेर मात्र हुँदैन नी आधार पनि चाहिएला ?
नेपालमा युवालाई राजनीतिक हतियार बनाइयो तर विकासमा लगाइएन । यसलाई परिवर्तन गराउन जरुरी छ । मैलै युवापुस्ताको राम्रो साथ पनि पाईरहेको छु। यहाँका समस्यासँग परिचित छु । हंगेरीको बुडापेष्टस्थित सेन्ट्रल युरोपियन युनिभर्सिटीबाट सार्वजनिक नीति र शासन प्रणालीमा स्नाकोत्तर गरेर आएको छु । त्यहाँ पढाईसंगै बाहिरि राजनीतिक सम्वन्ध विस्तार हुने मौका पनि मिल्यो । त्यसकारण म वीरगन्जको विकास गरेर बाहिरी दुनियाँसँग जोड्न सक्छु । मेयर चलाउने भनेको व्यवस्थापन गर्ने हो, नीति नियम बनाउने र लागु गर्ने हो, जुन मैले पढेर आएको छु । पछिल्लो समय पहाड र मधेसबीच दुरी बढाउन खोजीएको छ । मधेस उत्पीडनमा पर्यो भन्ने बिषय माओवादीले धेरै पहिले भनेको हो । उत्पीडन पहाडमा पनि छ ।
याे पनि पढ्नुस एमालेले जनयुद्ध स्विकार गरिसक्यो, एकतामा समस्या छैन् – झलनाथ खनाल
विरगञ्जमा यति मतान्तरले जित्छु भन्ने आंकलन पनि गर्नुभएको होला नी ?
युवा पुस्ता र शिक्षित वर्गले मलाई बुझेका छन् भन्ने लागेको छ । म सबैलाई कन्भिन्स गराउँदै छु । ६० प्रतिशत मत खस्छ भन्ने मेरो आंकलन छ । अन्य दलहरुले आर्थिक चलखेल सुरु गरिसके । चुनावका दिनसम्म के-के हुन्छ । मैले एजेण्डा लिएर जनतामा जाउँ गलत काम नगरौँ भनेको छु । यो मेरो परिक्षण पनि हो तर जित्छु भन्ने विश्वास छ ।
त्यहीत विरगञ्जमा माओवादीको संगठन राम्रो छैन भन्छन, फेरी चुनावमा १ भोटले मात्रै भएपनि जित्नु पर्यो !
६० प्रतिशत मत खस्ने आंकलन गर्दा जित्नलाई त्यसमध्य ५० प्रतिशत आउनैपर्छ । मेरो ठम्याई पनि यहि हो । जहाँसम्म संगठनको कुरा छ हामी लागिरहेका छौँ । जनताले अहिलेको परिवर्तनलाई बुझेका छन् । यहिँको रैथाने भएकाले व्यक्तिगतरुपमा पनि मलाई राम्रैसंग चिनेका छन् ।
ट्याग्स: maoust centre, raghunath bajagain, rahabar ansari